Graves' Disease (သိုင်းရွိုက်ဂလင်း ရောဂါ) - Hello Sayarwon
Graves’ Disease (သိုင်းရွိုက်ဂလင်း ရောဂါ)
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Graves’ Disease (သိုင်းရွိုက်ဂလင်း ရောဂါ)
Graves' Disease (သိုင်းရွိုက်ဂလင်း ရောဂါ) ကဘာလဲ။
Graves’ Disease (သိုင်းရွိုက်ဂလင်း ရောဂါ) ကဘာလဲ။
Graves’ diseaseဆိုသည်မှာသိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်းအများအပြားထွက်သောရောဂါတစ်မျိုး ဖြစ်သည်။ မိမိကိုယ်တွင်းရှိဆဲလ်များကိုမှားယွင်းစွာပြန်လည်တိုက်ခိုက်သောကိုယ်ခံအားစနစ်ချို့ယွင်းချက်တစ်မျိုးဖြစ်ပြီးသိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်းကိုအလွန်အကျွံ ထွက်စေပါသည်။ ကိုယ်ခံအားစနစ်မှ immunoglobulin ဟုခေါ်သောပဋိပစ္စည်းများကိုထုတ်ကာသိုင်းရွိုက်ကိုလှုံ့ဆော်ပါသည်။ ထိုအခါ သိုင်းရွိုက်ဂလန်း မှ သိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်းအများအပြားထွက်လာပါသည်။
သိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်းအထွက်များခြင်းကို ဖြစ်စေသောအကြောင်းရင်းများစွာရှိပါသည်။ သို့သော် လည်ပင်းကြီးရောဂါသည် အဖြစ်များသောအကြောင်းရင်းတစ်ခု ဖြစ်သည်။
သိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်းသည် ခန္ဓါကိုယ် အနှံ့ တွင် သက်ရောက်မှုများရှိသောကြောင့် ဤ ရောဂါ ၏ ရောဂါလက္ခဏာများသည် အာရုံကြောအဖွဲ့အစည်း၊ ဦးနှောက်ဖွံ့ ဖြိုးမှု နှင့် ကိုယ် အပူချိန် ပြောင်းလဲခြင်းတို့ ပါဝင်ပါသည်။
Graves’ Disease (သိုင်းရွိုက်ဂလင်း ရောဂါ) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
ဤရောဂါသည် အလွန် အဖြစ်များပါသည်။ အမျိုးသားများထက် အမျိုးသမီးများတွင် ပို၍ ဖြစ်ပွားပါသည်။ အသက် ၄၀ မပြည့်သောလူများတွင် ပို၍ ဖြစ်ပွားပါသည်။ အန္တရာယ် ရှိသောအချက်များကိုလျော့ချခြင်းအားဖြင့် ရောဂါကိုထိန်းချုပ်နိုင်ပါသည်။ ပိုမိုသောအချက် အလက် များအတွက် ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ပါ။
Graves’ Disease (သိုင်းရွိုက်ဂလင်း ရောဂါ) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
Graves’ disease ၏တွေ့ရများသောရောဂါလက္ခဏာများမှာ
စိုးရိမ် ပူပန်ုခြင်း နှင့် စိတ်တိုလွယ်ခြင်း၊ မောပန်းနွမ်းနယ်ခြင်း၊စိတ်ရှုပ်ထွေးခြင်း၊ အိပ်မပျော်ခြင်း
အမျိုးသမီးများတွင် ရာသီစက်ဝန်းပြောင်းလဲခြင်း၊ အမျိုးသားများတွင် ပန်းညှိုးခြင်းသို့မဟုတ် ကာမစိတ် လျော့ကျခြင်း
မျက်လုံးပြူးလာခြင်း၊ မျက်လုံးတွင် နာကျင်ခြင်းဖိနှိပ်ခြင်း၊ မျက်လုံးနီရဲခြင်းရောင်ရမ်းခြင်းအလင်းအထိမခံနိုင်ခြင်း ၊ နှစ်ထပ်မြင်ရခြင်း
Graves’ Disease (သိုင်းရွိုက်ဂလင်း ရောဂါ) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
Graves’ disease ကို ဖြစ်ပွားစေသောအကြောင်းရင်းများကိုရှင်းလင်းစွာမသိရသေးပါ။ လည်ပင်းကြီးရောဂါတွင် သင်၏ ကိုယ်ခံအားစနစ်သည် pituitary ဟော်မုန်းထွက်မှု ကိုဖိနှိပ်ထားသော Antibody များထွက်စေပါသည်။ pituitary ဟော်မုန်းသည် သိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်းထွက်မှု ကိုထိန်းချုပ်ပါသည်။ ထိုကြောင့် ဤရောဂါ ဖြစ်သောအခါ သိုင်းရွိုက်ဂလင်းသည်သိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်းများကိုအထိန်းအကွပ်မရှိထုတ်ပြီး ခန္ဓါကိုယ် တွင် ပြောင်းလဲမှုများ ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။
ငါ့ဆီမှာ Graves’ Disease (သိုင်းရွိုက်ဂလင်း ရောဂါ) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာ်တွေက မြင့်တက်စေသလဲ
Graves’ diseaseဖြစ်ပွားနိုင်ချေ ကိုမြင့်စေသောအကြောင်းရင်းများများစွာရှိပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်-
အမျိုးသားထက် အမျိုးသမီးများတွင် ပို၍ဖြစ်ပွား နိုင်သည်။
အသက် ၄၀ အောက်ငယ်သောသူများတွင် ပို၍ဖြစ်ပွားသည်။
ဆီးချိုသွေးချို အမျိုးအစား ၁၊ အဆစ်ရောင်ရောဂါ နှင့် Crohnရောဂါ များသည် လည်ပင်းကြီးရောဂါ ဖြစ်ပွားနိုင်ခြေကို မြင့်တက်စေပါသည်။
စိတ်ခံစားမှုပိုင်းဆိုင်ရာ နှင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ဖိစီးမှုများသည် လည်ပင်းကြီးရောဂါ ဖြစ်ပွားမှုကိုအစပျိုးစေပါသည်။
ကိုယ်ဝန်ရှိခြင်း နှင့် မကြာသေးမီကကလေးမွေးထားခြင်းသည် ရောဂါဖြစ်ပွားမှု ကို မြင့်တက်စေပါသည်။
စီးကရက်သောက်ခြင်းသည်လည်းလည်ပင်းကြီးရောဂါဖြစ်ပွားမှု ကို မြင့်တက်စေပါသည်။ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းသည် လည်ပင်းကြီးရောဂါ မျက်လုံး ပြဿနာ ဖြစ်ပွားနိုင်ခြေများစေပါသည။်
Graves’ Disease (သိုင်းရွိုက်ဂလင်း ရောဂါ) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
Graves’ diseaseကိုအောက်ပါစစ်ဆေးမှုများဖြင့် အတည်ပြုနိုင်ပါသည်။
နှလုံးခုန်သံသွေးပေါင်ချိန် စသောအချက်အလက်များ၊ ကတုန်ကယင်ဖြစ်ခြင်း၊ သိုင်းရွိုက်ဂလင်း ကြီးမားခြင်း နှင့် Graves’ disease ၏ မျက်လုံး ပြဿနာများကိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစမ်းသပ်မှု များပြုလုပ်၍ ရှာဖွေစစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။
သိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်းများကိုအများအပြားထွက်စေသောပဋိပစ္စည်းများ၊ သိုင်းရွိုက်ဂလင်းကိုလှုံ့ဆော် သောဟော်မုန်း (Thyroid stimulating hormone; TSH) ၊ သိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်း နှင့် pituitary ဟော်မုန်းပမာဏများကိုတိုင်းတာသောသွေးစစ်ဆေးမှုများ
Radioactive iodine uptake test သည် ရေဒီယိုသတ္တိကြွအိုင်အိုဒင်းဆားအားပါးစပ်မှ စားသုံးခိုင်းပြီးသိုင်းရွိုက်ဂလင်းအတွင်းမှ ရေဒီယိုသတ္တိကြွ အိုင်အိုဒင်း ၏ ပမာဏကိုတိုင်းတာစစ်ဆေးမှု ဖြစ်သည်။ အိုင်အိုဒင်းစစ်ဆေးမှုသည် ကျန်းမာရေးပညာရှင် အားလည်ပင်းကြီးရောဂါ ကိုဆုံးဖြတ်ရန် ကူညီပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အိုင်အိုဒင်းသည် သိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်းထုတ်လုပ်ရာတွင် အရေးပါသောကြောင့် ဖြစ်သည်။
ဥပမာကိုယ်ဝန်ကြောင့် ရေဒီယိုသတ္တိကြွ အိုင်အိုဒင်းအသုံးပြု၍ မရသောလူနာများတွင် အာထရာဆောင်းရိုက်ခြင်းကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။ ဤ စမ်းသပ်မှုသည် သိုင်းရွိုက်ဂလင်းအတွင်းကို မြင်နိုင်ပါသည်။
Graves’ Disease (သိုင်းရွိုက်ဂလင်း ရောဂါ) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
Graves’ disease ကိုကုသရန် နည်းလမ်း ၃ မျိုးရှိပါသည်။
Anti-thyroid drugs ; propylthiouracil, methimazoleအစရှိသောဆေးများ ဖြစ်ပါသည်။ အခြားကုသမှုများမစခင် ရောဂါလက္ခဏာများလျော့ချရန် Beta blocker များအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
ရေဒီယိုသတ္တိကြွ အိုင်အိုဒင်းကုထုံးသည် လည်ပင်းကြီးဟော်မုန်းများရောဂါအတွက် အသုံးများသောကုသနည်းတစ်မျိုးဖြစ်ပါသည်။ လူနာသည် ရေဒီယိုသတ္တိကြွ အိုင်အိုဒင်း-၁၃၁ ကိုသောက်သုံးရပါသည်။
အထက်ဖော်ပြပါ ကုသမှုများအလုပ်မဖြစ်ပါကသို့မဟုတ် သိုင်းရွိုက်ကင်ဆာဟုသံသယရှိပါကသို့မဟုတ် ကိုယ်ဝန်ဆောင် အမျိုးသမီးဖြစ်နေပါကခွဲစိတ်ကုသခြင်းကိုလုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။ သိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်းများခြင်းကိုလျော့ချရန် သိုင်းရွိုက်ဂလင်းတစ်ခုလုံးကိုထုတ်ပစ်ခြင်း ပြုနိုင်ပါသည်။
လူနေမှုပုံစံပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးတွေအသုံးပြုခြင်းကGraves’ diseaseကုသရာမှာဘယ်လိုအထောက်အကူပြုနိုင်မလဲ။
အောက်ဖော်ပြပါလူနေမှုပုံစံများနှင့် အိမ်သုံးကုထုံးများသည်Graves’ disease ကိုကုသသောနေရာတွင် အကူအညီပေးနိုင်ပါသည်။
ကောင်းမွန်စွာစားသုံးခြင်းနှင့် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းသည် အချို့ရောဂါ လက္ခဏာများသက်သာရန် ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။
စိတ်ဖိစီးမှုများကိုတတ်နိုင်သလောက် လျော့ချပေးခြင်းသည် အကူအညီပေးနိုင်ပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် စိတ်ဖိစီးမှုသည်လည်ပင်းကြီးရောဂါကိုပိုဆိုးစေသောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ သီချင်းနားထောင်ခြင်း၊ အားကစားလုပ်ခြင်း၊ လမ်းလျှောက်ခြင်း နှင့် စိတ်အပန်းပြေမှု ခံစားရသောအလုပ်များလုပ်ခြင်းတို့ပြုလုပ်ပါ။
မျက်စိကိုအေးမြမှုရှိအောင် ထားရှိပါ။ အအေးကပ်ပေးခြင်းဖြင့် အစိုဓါတ်ထိန်းပေးပါ။
မျက်စိပေါ် သို့ဖိအားနည်းစေရန် ကုတင်၏ ခေါင်းရင်းကို မြှင့်ပါ။
ရောင်ရမ်းခြင်း နှင့် နီရဲခြင်းသက်သာရန် အလွယ်တကူဝယ်၍ရသော Hydrocortisone ပါသောလိမ်းဆေးနှင့် ကရင်မ် များအသုံးပြုပါ။
Graves’disease. http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/graves- disease/-basics/definition/con-20025811. Accessed July 11, 2016.
Graves’disease. http://www.webmd.com/women/understanding-graves- disease-basics. Accessed July 11, 2016.